Britain: Darawal si la yaab leh shaqadiisa ku waayay | HalQaran.com
Home Warar Cusub Britain: Darawal si la yaab leh shaqadiisa ku waayay
Britain: Darawal si la yaab leh shaqadiisa ku waayay
Britain (Halqaran.com) – Darawal ka shaqeen jiray mid ka mid ah Shirkadaha dadka adeegga guryaha ugu geyso ee loo yaqaano (Delivery-ga) ayaa la ceyriyay, kadib markii uu diiday inuu xirto Maska Afka lagu xirto, waxaana la aamin sanyahay inuu yahay shaqaalihii ugu horreeyay ee loo ceyriyo diidmo ah in uu xirto maska gudaha Britian.
Ninkan oo lagu magacaabo Deimantas Kubilius ayaa ceyrintiisa waxa ay timid bilowgii hore ee cudurka COVID-19, waxaana ninkaan uu ku guul dareystay dagaal dhanka sharciga ah oo uu la galay shirkadii uu ka shaqeen jiray.
Deimantas Kubilius ayaa la sheegay inuu iska indha tiray amarro ay soo rogtay shirkadda uu ka shaqeen jiray, kuwaasi la xiriiray in shaqaala kasta uu xirto Maska Afka.
Darawalkan ka shaqeyn jiray Delivery-ga ayaa hadda lumiyay kiiskiisa, kadib markii uu qaadiga xukumay shirkadda qeybinta cuntada ee Kentfoods inay xaq u leedahay inay shaqada ka erido, arintaas oo ah tii ugu horreysay ee nooceeda ka dhacdo Britian.
Ugu dambeyn, ninkaan ayaa gabi ahaanba diiday in uu galay wax dambi ah, hasayeeshee qaadiga maxkamada ayaa sheegay in ceyrinta Mr kubilius ay aheyd mid sax ah, waxaana la laalay gabi ahaan dacwadii ninkan.
Darawal si la yaab leh shaqadiisa ku waayay